नगरकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल फ्रेन्चाइज, सिजीको भंगेरी दरबार रिसोर्टमा 'लेमन ट्री'
काठमाडौं। नगरकोटमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलको प्रवेश हुने भएको छ। चौधरी समुहको करिब एक अर्बको लगानीमा निर्माणाधीन भंगेरी दरबार रिसोर्टको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भारतको लेमोन ट्री होटल समुह अघि आएको हो।
सञ्चालक अरुण चौधरीले लेमन ट्रीसँग व्यवस्थापन सम्झौता गरेका छन्। सन् २०२१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको रिसोर्टका लागि चौधरी र लेमन ट्रीका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर रतन केशवानीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
'रिसोर्ट संचालनका लागि लेमन ट्री र भंगेरी रिसोर्टबीच सम्झौता भइसकेको छ,' प्रबन्धक नवीन गुरुङले भने, 'नगरकोटका लागि हाम्रो रिसोर्ट पहिलो चेन व्यवस्थापन हुनेछ। प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय चेन सहरमा मात्र केन्द्रित छन्, हामीले पर्यटकको आवगमन र मागलाई मध्यनजर गर्दै लेमोन ट्रीसँग सम्झौता गरेका हौं।'
२७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन रिसोर्टमा ५१ वटा कोठा, मल्टी कुजिन रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, बैंक्विट, हिटेड स्विमीङ पुल र स्पा लगायतको सुविधा रहेको उनले बताए। चारतारे स्तरको यो रिसोर्टमा दुईवटा सुइट रुम, २५ वटा डिलक्स र २४ वटा स्तरिय रुम छन्।
'रिसोर्टमा पाँचवटा भवनको संरचना हुनेछन्। एउटा भवनमा लबी, रिसेप्सन, बैंक्विट हल, रेष्टुरेण्ट लगायत कक्ष रहनेछन् भने तीनवटा भवनमा रुम रहनेछन्। बाँकी एउटा भवनमा हेल्थ स्पा, इन्डोर हिटेड स्विमीङ पुल लगायतका कक्ष रहनेछन्,' उनले भने।
विभिन्न कक्षबाट हिमश्रृंखलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने डिजाइनमा रिसोर्टका संरचना निर्माण गरिएको छ। 'हरेक रुम र बालकोनी तुलनात्मक रुपले फराकिलो बनाइएको हुँदा ग्राहकले सहजै सूर्योदय, हिमश्रृंखला, उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ,' उनले भने, 'शान्त र हरियाली वातावरणमा निर्माण गरिएको कारण पर्यटक एवं ग्राहकले यहाँ छुट्टै किसिमको अनुभव लिन सक्नुहुनेछ।'
रिसोर्टको आर्किटेक्ट डिजाइन पनि भारतीय कम्पनीले गरेको हो। रिसोर्टमा ग्राहक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै ब्यागेज स्क्यानिङ उपकरण राखिने भएको छ। 'कनस्ट्रक्सनको करिब ५५ प्रतिशत काम पूरा भइसक्यो । एक वर्षभित्रै फुलफ्लेजमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित काम भइरहेको छ,' प्रबन्धक गुरुङले भने।लेमोन ट्री होटल भारतको चर्चित होटल व्यवस्थापन समुह हो। यो समुहले विभिन्न ४८ गन्तब्यमा ८० वटा होटल संचालन गर्दै आएको छ। यो समुहले सन् २००४ मा ४९ कोठा क्षमताको होटल संचालन गरेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको थियो। हाल यो समुहअन्तर्गत आठ हजार कोठा संचालित छन् भने आठ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ।
यो समुहअन्तर्गत औरिका होटल्स एण्ड रिसोर्ट, लेमोन री प्रिमीयर, रेड फक्स होटल्स, किज प्रिज्मा, किव सेलेक्ट र किज लाइट लगायत विभिन्न ब्राण्ड संचालित रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा २०७२ बैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनामा १२ वटा ठूला होटल थिए। त्यसमध्ये भंगेरी पनि हो। मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका किशोरराज पाण्डेले चौधरी समुहलाई बेचेका हुन्। डेढ वर्षअघि भंगेरी खरिद गरेर चौधरी ग्रुपले थप संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको हो।
नगरकोटमा यतिबेला पुनः होटल व्यवसायमा लगानी बढेको छ। क्षति पुगेका संरचना मर्मत गरेर व्यवसायीले लगानी थप्दै लगेका छन्। पछिल्ला तीन वर्षमा नगरकोटमा ठूला थप आधा दर्जन होटल थपिएका छन्।
Share It In :
मार्टिन आइसक्रिमको फ्रेन्चाइज
जापानी 'रामेन' सहित ३० प्रकारका जापानी खाना नेपालमा, एक वर्षभित्र १० वटा आउटलेट खुल्दै
Bizexhive isanew platform to enlistadifferent kind of businesses all over Nepal. This website helps to expand Business, Franchise Opportunities and also helps to promote your business.
Pushpa Nagar Marga, Thapagaun
All right reserved BizExHive 2019
Design and Developed at Codeyantra 2019